« Apokalypsy »
« Apokalypsy 11 [MDG - malagasy] »
11:1 "Ary nomena volotara tahaka ny tehina aho; ary nitsangana ilay anjely ka nanao hoe: Mitsangàna, ka refeso ny tempolin’Andriamanitra, sy ny alitara, ary ireo izay mivavaka ao;"
11:2 "Fa ny kianja eo ivelan’ny tempoly dia avelao ihany, fa aza mba refesina; fa nomena ny jentilisa izany, ka hanitsaka ny tanàna masina roa amby efapolo volana izy."
11:3 Ary homeko hery ny vavolombeloko roa, ka haminany enimpolo amby roan-jato amby arivo andro izy, sady hitafy lamba fisaonana.
11:4 Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa, izay mitsangana eo anatrehan’Andriamanitry ny tany.
11:5 "Ary raha misy te-handratra ireo, dia misy afo mivoaka amin’ny vavany ka mandany ny fahavalony; ary raha misy te-handratra ireo, dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy."
11:6 "Ireo dia manam-pahefana handrindrina ny lanitra, tsy hilatsahan’ny ranonorana amin’ny andro aminaniany; ary manam-pahefana amin’ny rano koa izy hampody azy ho rà sy hamely ny tany amin’ny loza rehetra araka izay andro tiany na oviana na oviana."
11:7 Ary rehefa tanteraka ny fanambarany, dia hiady aminy kosa ilay biby miakatra avy amin’ny lavaka tsy hita noanoa ka haharesy sy hahafaty azy ireo.
11:8 Ary ny fatiny hiampatra eny an-dalamben’ny tanàna lehibe, izay atao, araka ny hevi-panahy, hoe Sodoma sy Egypta, sady tao koa no nanomboana ny Tompontsika tamin’ny hazofijaliana.
11:9 Ary avy ny olona sy ny fianakaviana sy ny fiteny samy hafa sy ny firenena dia samy hijery ny fatin’ireo hateloan’andro sy tapany, ary tsy avelany halevina ao am-pasana ny fatiny.
11:10 Ary ny mponina ambonin’ny tany hifaly ny aminy ka hiravoravo sy hifanati-javatra izy, satria nampangirifiry ny mponina ambonin’ny tany ireo mpaminany roa ireo.
11:11 Ary rehefa afaka ny hateloan’andro sy tapany, dia nisy fanahin’aina avy tamin’Andriamanitra niditra tao anatin’ireo, ary nijoro tamin’ny tongony izy, ka raiki-tahotra indrindra izay nahita azy.
11:12 "Ary nahare feo mahery avy tany an-danitra izy ireo nanao taminy hoe: Miakara aty. Dia niakAry tamin’izany ora izany dia nisy horohorontany mafy, ka rava ny ampahafolon’ny tanàna, ary maty tamin’izany horohorontany izany ny olona fito arivo; ary raiki-tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an’Andriamanitry ny lanitra;"
11:13 "Ary tamin’izany ora izany dia nisy horohorontany mafy, ka rava ny ampahafolon’ny tanàna, ary maty tamin’izany horohorontany izany ny olona fito arivo; ary raiki-tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an’Andriamanitry ny lanitra;"
11:14 "Lasa ny loza faharoa; ary indro, avy faingana ny loza fahatelo."
11:15 "Ary ny anjely fahafito nitsoka, dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: Ny fanjakana amin’izao tontolo izao dia efa lasan’ny Tompontsika sy ny Kristiny; ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay."
11:16 Ary ny loholona efatra amby roa-polo, izay mipetraka eo ambonin’ny sezany eo anatrehan’Andriamanitra, dia niankohoka ka nivavaka tamin’Andriamanitra,
11:17 "Nanao hoe: Misaotra Anao izahay, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; satria nasehonao ny herinao lehibe, ka efa manjaka ianao."
11:18 "Ary tezitra ny firenena, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pitia ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina, ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe; ary mba hanimbanao izay manimba ny tany."
11:19 "Ary novohana ny tempolin’Andriamanitra any an-danitra, ka hita ny fiaran’ny fanekeny teo anatin’ny tempoliny; ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana sy horohorontany ary havandra vaventy."
Previous Book | Previous Chapter | Next Chapter |